Liverpool oo balan kaga sameystay Chelsea finalka koobka Carabao Cup kaddib markii ay guul ka gaartay Arsenal… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye January 20, 2022
(London) 20 Jan 2022. Liverpool ayaa balan kaga sameystay Chelsea finalka koobka Carabao Cup kaddib markii ay guul kaga gaartay kooxda Arsenal 0-2, kulankii lugta labaad wareegga afar-dhammaadka ee tartankan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida ahayd ee Liverpool.
Daqiiqadii 19-aad kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Diogo Jota, kaddib markii ay caawinta goolka kaga timid saaxiibkiis Alexander-Arnold.
79 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay Diogo Jota ayaa wuxuu markale ka dhigay 0-2 ay ku hoggaamineysay kooxda Liverpool.
Daqiiqadii 90-aad marka ay ciyaarta mareysay kooxda Arsenal ayaa noqotay 10 xiddig kaddib markii uu kaarka roosaha ka qaatay laacibkooda khadkad dhexe ee Thomas Partey.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 0-2 ay Liverpool kaga soo adkaatay kooxda Arsenal oo ay ku booqatay garoonka Emirates, Reds ayaa sidaas ku jaratay tikitkeeda kulanka finalka koobka Carabao Cup oo ay kula ciyaari doonto naadiga Chelsea.